टिप्पर ड्राइभर भन्छन्– हामी हत्यारा होइनौँ - Everest Talk
टिप्पर ड्राइभर भन्छन्– हामी हत्यारा होइनौँ1 min read
“म राजा हुँ रोडको” तरिकाले बाइकवाला नै कुदाउँछन् । नजिकै आए पछि ब्रेक त हान्नै पर्यो, भारी बोकेको साधनलाई ब्रेक हान्न कति गाह्रो पर्छ । ब्रेकको सन्तुलन छिटो नमिल्ने भएकाले दुर्घटना बढेको हो ।
२०७६, ७ कार्तिक बिहीबार १५:०१
मनबहादुरले टिप्परको ब्रेक जोडले दबाएपछि बाइकवाला हातमा हेल्मेट बोकेर फर्कियो । बूढो अनुहार देखेर बाइकवालाको मनमा खै के आयो कुन्नि ? औँला ठड्याएर भन्यो, “आँखा छैन ?” र, ऊ फर्कियो ।
गठ्ठाघरमा बाइकवालाले यति धम्काएपछि मनबहादुरले कंलकीमा सामान अनलोड गरे । बाटाभरि नै बाइकवाला दिमागमा आयो । एक मनले सोचे– ‘अरूको गाली नै मात्र खाएर के काम गर्नु ? छाड्दिऊँ कि क्या हो !’
फेरि अर्को मन बाल्यो– ‘कुन काममा चाहिँ चुनौति छैन र ! सबै काममा छ नि ।’ यही सोच्दासोच्दै उनी सामान लोड गर्ने ठाउँमा पुगे ।
अनिँदो रात, साहूको लगातारको फोन, बाटोको समस्या, मनबहादुरले जीवनमै धेरैपटक सोचको कुरामध्ये एक यही हो– ‘साला जिन्दगीमा डाइभर नै किन बनेँ म ?’
टिप्परका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा र सामाचारको मुख्य पृष्ठमा सधैँ नै अटाएका छन् । यसकारण टिप्परको समाचार नयाँ होइन, तर पूरानो पनि रहन सक्दैन । आम मानिसले भनेअनुसार टिप्परले दुर्घटना लगातार निम्त्याएको छ । सरसर्ती हेर्ने हो भने सडकमा दुर्घटनाको चाप पनि टिप्परकै कारणले भएको हो भनेर यकिन गर्न सकिन्छ । तर, हरेक कुरामा दुई पक्ष हुने भएकाले गल्ती कसको धेरै रहन्छ भन्ने कुरा टिप्पर दुर्घटनामा गुमनाम नै रहन्छ ।
आयतनकै हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य सवारीको तुलनामा टिप्पर ठूलो हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गल्ती जसकै भए पनि प्रत्येक दुर्घटनामा ठूला सवारीले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु परेको प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।
यता चालक समूह आफूहरू सधैँ पीरमा परेको बताउँछन् । “समाचारले पनि सधैँ हामीलाई दोषी देखाउँछ । र, त्यही कुराले हामीलाई सबैभन्दा दुःखी बनाउँछ ।” उनीहरू गुनासो गर्दछन् ।
टिप्परलाई यमराज भनेर उडाउनेहरूको लर्को पनि ठूलै रहेको छ । विभिन्न तवरले उडाए पनि टिप्परले समाजमा खेलेको भूमिका निकै सम्झन लायक भने छ । यो सत्य हो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका अनुसार विगत २०७० बाट ७५ सम्ममा हेर्ने हो भने टिप्परसम्बद्ध दुर्घटनाको दर निरन्तर बढ्दो छ । ७०–७१ मा ८९२, ७१–७२ मा ९४७, ७२–७३ मा १२१०, ७३–७४ मा १४००, ७४–७५ मा १५८० टिप्परसँग सम्बन्धित दुर्घटना घटेका छन् । दुर्घटनामा अधिकांश टिप्परसँग बाइक जोडिएर आउने गरेका छन् ।
उपत्यकाको टिप्परलाई अध्ययन गर्दा भक्तपुरको सल्लाघारीमा लस्कर रहेर बसेका टिपरहरू साँझ आठबजेबाट प्रायः खुल्ने गरेका छन् ।
इमाडोलका बेलबहादुर राइले गाडी चलाएको २०५२ बाट हो । उनीले टिप्परको स्टेरिङ समाएको चाहिँ १० वर्ष भयो । दिनको एक ट्रिप मात्र खेप्न भ्याइने भएकाले उनलाई परिवार पाल्न धौधौ नै छ ।
“उपत्यकाभित्र साँझ आठ बजेबाट मात्र टिप्परको लागि बाटो खुल्ला छ । तर, यो पनि खुल्छ नै भन्न भने सकिन्न ।” चालक सदस्य भन्छन्, “सरकारको यो टिप्पर चालकलाई हेप्ने प्रवृति हो ।”
त्यसो त उपत्यकाको सडकमा दिनमा टिप्पर चल्दै नचल्ने पनि होइन । तर, त्यसको लागि पास आवश्यक छ । पास पाएपछि दिनमै टिप्पर सडकमा गुडाउन पाइन्छ ।
“म नामचाहिँ भन्दिनँ”- एक टिप्पर चालक भन्छन्– “सरकारले हामी निमुखालाई हेपेको छ । पहुँचवालाले पास मिलाएर दिनमै गाडी चलाउन सक्छन् । हाम्रा ठूलो मान्छे छैनन्, त्यसैले हामीसँग पास पनि छैन । हामीले टिप्पर चलाउन रातको आठ बजे नै कुर्नुपर्छ । तर, त्यो आठ पनि ट्राफिकको मुडमा भर पर्छ । कहिलेकाहीँ दश बजेमात्र सल्लाघारीबाट ट्राफिकले टिप्परलाई अनुमति दिन्छन् ।”
धेरैपटक चालकहरू ट्राफिकसँग “हामीलाई अन्याय भयो” भन्दै न्याय खोज्न पनि गए । तर, उनीहरूले उल्टै “यो माथिको आदेश हो । हामीलाई यो बारेमा केही थाहा छैन” भनेर फर्काइदिए ।
“पास पाउँदाचाहिँ मान्छे नै नमार्ने हो र ? कि पासले मान्छे मार्दैन ।” यो पंक्तिकारलाई उल्टै प्रश्न गर्छन उनीहरू ।
बेलबहादुरले बुझे अनुसार उनीहरूलाई (टिप्पर चालकहरूलाई) सरकारले मान्छे गन्दैन । उनीहरूलाई हाम्रा नै जनता हुन भन्न सक्दैन । उनीहरूलाई त केवल “हामीले मान्छे मार्छौँ” भन्ने मात्र छ । तर, हामी वास्तवमा हत्यारा भने होइनौँ ।
हाम्रो गल्ती नै हुँदैन भन्ने पनि छैन । हामी मान्छौँ कि हाम्रो पनि गल्ती हुन्छ । तर ठूलो गाडी देख्दैमा ठूलै साधनको मात्र गल्ती हुन्छ भन्नेहरूचाहिँ मूर्ख मात्र हैनन्, पटमूर्ख हुन् ।
यदि टिप्परको मात्र दोष छ भने किन टिप्परले बाटोमा हिँड्नेलाई हान्दैन, किन कारलाई ठोक्दैन, किन बससँग जुद्दैन ? जहिले बाइकलाई नै हान्नुपर्ने छ भन्ने केही छ र ? छैन नि । यहाँको नीति नियम सबैले नमानेर हो । दोषी त बाइकवाला पनि छन् । तर, उनीहरू यो मान्न तयार छैनन् ।– यो टिप्पर चालकहरूको संयुक्त आवाज हो ।
दुर्घटना र सरकारबारे टिप्पर चालकः
टिपरको आयतन ठूलै हो, हामी मान्छौ । दश टन भारी बोकेर त्यही बाइक हिँड्ने सडकमा हामी सँगै हिँड्छौँ । तर, उनीहरूलाई कुदाउन कुनै लिमिट छैन । सयभन्दा उकालोको स्पिडमा उनीहरू दौडन्छन् । हामी भारी बोकेर ४० वा ५० कै स्पीडमा हिँडे पनि आवाज बढी आउँछ । आवाज ठूलो भएपछि स्पीडमा छ जस्तो देखिन्छ । “म राजा हुँ रोडको” तरिकाले बाइकवाला नै कुदाउँछन् । नजिकै आए पछि ब्रेक त हान्नै पर्यो, भारी बोकेको साधनलाई ब्रेक हान्न कति गाह्रो पर्छ । ब्रेकको सन्तुलन छिटो नमिल्ने भएकाले दुर्घटना बढेको हो ।
टिप्परले नै सामान बोकेर बनाएको सडक हो यो । अहिले उसैले चल्न बन्देज छ । सरकारले “कार्यलय जान आउन कठिन हुने भएकाले यसो गरिएको हो” भन्यो, ठीकै छ । तर, कार्यलयमा कर्मचारी नै भेटिदैनन् भने आठ बजेसम्म हामीलाई किन कुराउनु ? कुन कार्यलयमा आठ बजेसम्म कर्मचारी बस्छ ? यसकारण हामी टिपर चालकलाई सरकारले अन्याय गरेको छ ।
टिप्पर चालकको एउटै माग छ कि हामीलाई बिहान नौ बजेबाट एघार बजेसम्म कुदाउन नदिनू र बेलुका चार बजेबाट छ बजेसम्म नदिनु । त्यो समयमा जाम हुन्छ मान्छौ । त्यो समयमा कुदाउँदैनौ, ठीक छ । तर अरू समयमा त कुदाउन दिनुपर्छ । नियम सबैलाई उत्तिकै र उस्तै लाग्यो र सबैले नियम माने भने न दुर्घटना हुन्छ न अन्याय हुन्छ ।
Tags: टिप्परटिप्पर ड्राइभरदुर्घटनानिरज दाहाल